Ama-Biohazards - US Ilungelo Lokwazi
NgoJulayi 2020, i-US Right to Know yaqala ukuhambisa izicelo zamarekhodi omphakathi ngenhloso yokuthola imininingwane evela ezikhungweni zomphakathi ngemizamo yokuthola okwaziwayo ngemvelaphi yenoveli coronavirus SARS-CoV-2, edala isifo iCovid-19. Siphenya nezingozi, ukuvuza nokunye ukwenzeka emalabhorethri lapho kugcinwa khona futhi kuguqulwe amagciwane angaba namandla obhubhane, kanye nezingozi zezempilo zocwaningo lwe-gain-of-function (GOF), olubandakanya ukuhlolwa kulawo magciwane ukukhulisa ibanga lawo lokusingathwa, i-infectivity , ukuhanjiswa noma ukuvela kwegciwane.
Funda kabanzi mayelana kungani sicwaninga ngemvelaphi yeSARS-CoV-2, amalebhu okuphepha kanye nocwaningo lwe-GOF
I-US Right to Know iyiqembu locwaningo eliphenya ngokugxila ekubonakaleni kwezempilo yomphakathi.
Sikhathazekile ngokuthi izinto zokuphepha zikazwelonke e-United States, eChina nakwezinye izindawo zingase zinganikeli isithombe esigcwele nesiqotho salokho okwaziwayo ngemvelaphi yeSARS-CoV-2 kanye nezingozi zamalabhorethri okuphepha kanye nocwaningo lomsebenzi . Umphakathi wesayensi womphakathi nowomhlaba wonke unelungelo lokwazi ukuthi iyiphi idatha ekhona ngalezi zindaba. Sizobika noma yikuphi okutholakele okuwusizo okungavela ocwaningweni lwethu.
Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela ubone:
Ukufundwa okunconyiwe: Ngabe i-SARS-CoV-2 yaqhamuka ebhodini? Ziyini izingcuphe zokucwaninga ngomsebenzi?
Isingeniso: Kungani sicwaninga ngemvelaphi yeSARS-CoV-2, amalebhu ezokuvikela kanye nocwaningo lwe-GOF
Isimangalo se-FOIA ngemvelaphi ye-SARS-CoV-2, ubungozi bokuzuza kocwaningo lomsebenzi kanye namalebhu e-biosafety
Bhalisa lapha ukuthola izibuyekezo zamasonto onke mayelana nophenyo lweLungelo Lokwazi. Ungakwazi banikele lapha ukusekela uphenyo lwethu.
Ingobo yomlando yamaBiohazards>